ငါထလာမယ့်အနည်းငယ်စီမံကိန်းများအတွက် MOTION graphics အယ်ဒီတာရှာနေတာ!
** *** အတှေ့အကွုံရှိရမည်
အကျိုးသက်ရောက်မှုပြီးနောက် -Motion ဂရစ်ဖစ်, 2D / 3D,
ဤသည်မှအခပေး Gig သည်နှင့် Culver စီးတီး, CA. ၌အကြှနျုပျတို့၏ Post ကိုအိမ်ထဲမှထွက်အမှုကိုပြုရပါမည်
သင့်ရဲ့ Reel, ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်နှုန်းပေးပို့ပါ။
*** အဆိုပါအကြောင်းအရာ LINE အဘို့ဤ template ကို ကျေးဇူးပြု. အသုံးပြုပါ:
"ကို Motion Graphics - (သင့်အမည်) - Reel နှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်"
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါ ^ _ ^ သင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်မျှော်လင့်
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် motion ဂရစ်ဖစ်အဆိုတော် photoshop ထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2017-11-30
နောက်တစ်ခု: မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Editor ကို